अब कसैसँग एकता र एकीकरण हुँदैन : ओली « Drishti News – Nepalese News Portal
अब कसैसँग एकता र एकीकरण हुँदैन : ओली
८ मंसिर २०७८, बुधबार 5:42 pm
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब एमालेले कसैसँग एकता र एकीकरण नगर्ने बताएका बताएका छन् । बुधबार साइबर सर्कल घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमालेले एकता र एकीकरण गर्नुपर्ने कुनै पार्टी नभएको बताए ।
अरु पार्टीमा रहेकाहरु भने एमालेमा आउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘अब नेकपा एमालेले एकता र एकीकरण गर्ने पार्टी कुनै पार्टी बाँकी रहेन । त्यसकारण नो एकता, नो एकीकरण । आउनुुहोस्, नेकपा एमालेमा मिलेर काम गरौं ।’
ओलीले अब एकता र एकीकरण कोसँग गर्ने ? मावध नेपालसँग ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले भने ‘अब एकता एकीकरण, एकताका लागि वार्ता । वार्ता कोसँग? माधव नेपालसँग गर्ने ? एकीकरण? माधव नेपालले झुक्याएर लगेका साथीहरु निद्राबाट ब्युँझिनुस्। ब्युँझिनुस् र फर्किनुस् ।’